Ukuhanjiswa kwamandla kwenqaba, iNqaba yoNxibelelwano-Qiangli
I-engile yombane inqaba yentsimbi Inqaba yentsimbi yombane luhlobo lwesakhiwo sentsimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Ngeminyaka yoo-1980, amazwe amaninzi ehlabathini aqala ukusebenzisa iiprofayili zombhobho wentsimbi kulwakhiwo lwenqaba xa kuphuhliswa imigca yokuhambisa ye-UHV. Iinqaba zetyhubhu zensimbi ezinemibhobho yentsimbi njengoko eyona nto iphambili yavela. EJapan, iinqaba zetyhubhu zentsimbi ziphantse zasetyenziswa kwimigca ye-1000kV UHV nakwiinqaba. Bona ...
Qingdao Qiangli Ulwakhiwo Co., Ltd, eyafunyanwa ngo-1998, isebenza kuzo zonke iintlobo zobunjineli isakhiwo uyilo zobunjineli, ukwenziwa, kunye nofakelo, ezibonelela ngenkonzo enye-stop kubaxumi njenge enkulu-isikali ezizodwa lweshishini. Thina afanelekayo Qingdao High Technology Enterprise kunye Vice kaMongameli Enterprise Jiaozhou Ulwakhiwo Association.
Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano, I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba, Umbane we-Angle Steel Towers, Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi, Ulwakhiwo Tube Steel,